Ikhaya / Blog / I-3, ~ 8, Design yoyilo yegumbi lokuhlambela, Izitayile ezahlukeneyo ekunokubonelelwa ngazo
2021 / 04 / 07 uhleloBlog 313 0
Kwisihombiso sokuhlambela, indlela efanelekileyo yokusebenzisa indawo encinci ibaluleke kakhulu, igumbi lokuhlambela kuyilo loyilo kunye noyilo lokunikela ingqalelo ekhethekileyo, namhlanje ndinesishwankathelo esibanzi soyilo lwe-3 ㎡ ~ 8 ㎡ yokuhombisa igumbi lokuhlambela.
Igumbi lokuhlambela eli-3 ~ 4
Ixabiso eliphambili eliphambili
Njengokungathi uhlala kwihlathi elinemvula elifana nokuyilwa kwesitayile, nokuba ibhafu ineZen. Beka amanzi afudumeleyo, ufefe amagqabi amade, akukho nto ilunge ngakumbi emhlabeni kunokuzonwabisa kwindawo yokuhlambela.
Izinto ezindala zilahliwe zaphuliwe, kodwa ukusetyenziswa kakuhle kuyamangalisa ngokungalindelekanga. Ifenitshala eyenziwe ngomthi ingasetyenziselwa ukubuyisela ubuhle be-rustic, kwaye ubomi obuncinci bunokuba sisihobe.
Xa okuluhlaza kunempilo kudibana negumbi lokuhlambela, ndicinga ukuba kuyonwabisa ukuhlala imizuzwana embalwa ukujonga okuhle phambi kwesipili. Uyilo lophahla olunemibala yophahla + lwewindow ejonge apha ngasentla lukhethekile kwaye lucacile.
Ngokuthe ngcembe ukuphuka kukaMoses kubonakala ngathi liphupha lokuvuka, hlamba amazinyo kwaye uhlambe ubuso bakho kusasa ukuze uzisuse ephupheni ubuyele kwinyani, ndiyathemba ukuba lo mbala uza kukuvumela ukuba uvuke kwaye ububone ubuhle bephupha.
Ngokuthe ngcembe ukwaphuka kwemosisi kubonakala ngathi liphupha lokuvuka, hlamba amazinyo kwaye uhlambe ubuso bakho kusasa ukuze uzisuse ephupheni ubuyele kwinyani, ndiyathemba ukuba imibala enjalo iyakukuvumela ukuba uvuke kwaye ububone ubuhle bephupha .
Uyilo lweMinimalist ihlala ikwangumphumo wokugqwesa, uyilo kunye nokuthelekiswa kweenyawo zeeplanga kunika yonke indawo ubuhle bobuhle. Kwaye kwangaxeshanye unokukhetha indawo ethile esebenzayo.
Ukuba isibhakabhaka sigcwele iinkwenkwezi ngaphandle, imeko yomfanekiso wokuhlamba ngefestile inokuba yeyothando ngokupheleleyo. Nje ngokwenyani okanye ukongeza ikhethini lingcono, imfihlo isabaluleke ngakumbi kune-aesthetics.
Inkcubeko yokufunda ngasese yangasese, ekugqibeleni bangaphi abantu ebebambelele kuyo? Ngapha koko, ixesha lokuya kwindlu yangasese yincopho yenkuthazo kubantu abaninzi, ke kulungile ukufumana ishelufa yeencwadi ezinokuqinisekisa ukufuma.
Ibhafu ye-Retro iqikelelwa ukuba luthando lolutsha oluninzi loncwadi, ngenxa yoko ukonwabela ukuhlamba, ngokungathi kwipeyinti yomzobi kwilizwe lobugcisa, kuqikelelwa ukuba ufuna ukulala apha.
5 ~ 6㎡ Igumbi lokuhlambela
IKhabhinethi yesipili kunye nekhabhathi esisiseko
Ifenitshala yegumbi lokuhlambela ayiyonto inkulu, kodwa inokusetyenziswa kwigumbi lokuhlambela elingabalulekanga njengokuhlamba ubuso, ikomityi yebrashi yamazinyo, incakuba ifihlwe ngobuqili emva kwesipili, kodwa nezinye izinto ezisebenzisa ixesha elide zokuhlamba nokucoca ziqokelelwe kakuhle ngaphantsi kwekhabinethi encinci. Kunye noyilo lwesipili xa lulonke, inokwandiswa ibe yindawo ephindaphindwayo yendawo.
Iithayile zasekhaya ezingabizi kwaye zisemgangathweni
Udonga lokuhlambela oluncinci kunye nomhombiso womgangatho akufuneki ucaciswe kakhulu, iithayile eziphezulu ezikumgangatho ophezulu ezingeniswe ngaphandle zibiza kakhulu, kwaye akukho lula ukuvelisa ubuchwephesha obunamandla kwisithuba esincinci, kungcono ukusebenzisa amashumi eedola kwisikwere semitha yeethayile zasekhaya.
Indawo encinci yendlu yangasese eyahluliweyo
Eyona yangasese ixhaphakileyo kwimarike yahlulwe yonke yahlula kubini Indlu yangasese iyonke kuba itanki kunye nendlu yangasese kukubumba, inqanaba lezinto ezindala liphezulu kakhulu, ixabiso libiza kakhulu kunendlela yendlu yangasese eyahluliweyo, egubungela indawo enkulu ngakumbi. Ke kwisithuba esincinci ukukhetha indlu yangasese eyahluliweyo ukugcina indawo kunye nokonga imali. Inde kodwa ziisentimitha ezingama-70 zesitulo sendlu yangasese “esibhityileyo” esilelona silulungeleyo igumbi lokuhlambela elincinci
Isitya sokuhlambela senqaba isitya seentsika
Kwigumbi lokuhlambela elincinci zama ukungafaki isitya seentsika, kuba indawo yekholamu engezantsi ayinakusetyenziswa, ngaphandle kokuba isongelwe kwikhabhathi yekhabhathi eyenziwe ngokwezifiso, ezi ndleko zimbini zidityanisiweyo kungangcono ukuthenga ububanzi obuncinci besitya sokubala, gcina imali emva koko uthenge umthamo wekhabhinethi enkulu engaphantsi. Yongeza iikhabhathi ezincinci okanye iibakaki zokugcina ukungangqinelani kunye nokuphela, kunye neesepha izitya kunye nemivalo yetawuli kunye nezinye izixhobo zekhompyutha, imali enkulu kunye nokulungiswa kwendawo yokugcina igumbi lokuhlambela kuyimpumelelo enkulu.
Jonga ibhafu enzulu kodwa engabanzi
Ubude bebhafu engaphantsi kwe-1.5 yeemitha, ubunzulu buhlala bunzulu kunebhafu yokuhlamba ngokubanzi, malunga ne-70 cm. Le bhafu kulula ukuyimela kunebhafu yokuhlamba jikelele, kwaye ayizukuchaphazela ukonwaba kokusetyenziswa nangayiphi na indlela. Amagumbi okuhlambela amancinci kufuneka akhethe ibhafu encinci kwaye enzulu.
Itoilet ngaphezulu kwekhabhinethi
Ngaphezulu kwetanki yangasese sisihombiso esiqhelekileyo sokuhlambela "indawo yokucoca indawo", enyanisweni, kwimeko yokungachaphazeli indlu yangasese, singasebenzisa esi sithuba ukwenza ikhabhathi ejingayo, ikhabinethi ingafakwa kwiphepha langasese, iitawuli zesandla, isepha, njl.
Isitayile sokufaka ngaphezulu kweeshelfu
Nokuba ngaphezulu komphezulu wesitya okanye kwitheyibhile yekhabhathi yokuhlambela, beka ngakumbi izinto zokucoca kunye nogutyulo lwelindle ziya kujongeka zixinene, kwaye kulula ukuzichukumisa, kungakuhle ukubethelela icandelo elingaphezulu kwebheseni eludongeni kwi-10 cm ububanzi ishelfu, ukuba nje inokubekwa phantsi kwebhotile yokuhombisa, ibrashi, iikomityi zokuhlamba, njl. Ukuphakama kweshelufu ukuze kungathinteli ukusetyenziswa kweepompo kufanelekile, izinto zinokukhethwa ngomthi, iglasi, njl.
7 ~ 8㎡ Igumbi lokuhlambela
Elula emnyama nomhlophe iya kwenza igumbi lokuhlambela libukeke likhanya ngakumbi.
Umbala wokhuni wokuqala nawo uyahlaziya kakhulu.
Isibuko akufuneki sibe sisikwere, khetha isipili esijikeleziweyo sikwenziwe ngokobuqu Oh.
Unokukhetha ezinye iithayile zomgangatho omncinci, ezibonakala zintle emgangathweni.
Iithayile ezimhlophe ezimsulwa ziyathandabuza, yiza emgceni wesinqe.
Udonga oluhlaza okwesibhakabhaka, ngokungathi siselwandle, ebhafini kuya konwaba ngakumbi ukuhlamba.
Ndihlala ndiziva ngathi igumbi lokuhlambela kufuneka libe noluhlaza okwesibhakabhaka ukuze libukeke lilungile.
Nokuba bumnyama buluhlaza okanye luhlaza okwesibhakabhaka, okanye iindidi zekholaji eblue, kuyakubakho ukuziva kolwandle.
Ezi ntlobo zimbini zeblue zilungile.
Ukuba ucinga ukuba iyathandabuzeka, ungaseta nodonga lwezithombe kwigumbi lokuhlambela, kodwa kufuneka uqiniseke ukuba ikhaya lakho linegumbi lokuhlambela, kungenjalo akuyi kuba mnandi ukuchitheka kwamanzi.
Ukuhonjiswa kweediliya nako kuyonwabisa.
Yahlula indawo yokuhlamba kwindawo yonke, kungcono ukuyicoca.
Ukuxhoma umzobo kwigumbi lokuhlambela lukhetho olufanelekileyo.
Ukuba ufuna ukwenza ikhaya lakho likhangeleke ngakumbi, lo mdlalo weetayile awulunganga kakhulu?
Ekugqibeleni ndafumana ityala epinki, intliziyo wentombazana ungaphoswa.
Ikholaji enemibala enemidlalo efanelekileyo, eyoyikekayo ngokupheleleyo.
Ukudibanisa umbala ocacileyo, obomvu nohlaza kuphumile.
Kwiindonga zokuhlambela ezineshelufu ezithile, lukhetho olufanelekileyo.
Imibala eqaqambileyo iya kwenza ukuba lonke ikhaya licace.
Ngaphambili :: Isitya sokuhlambela ngaphandle sisebenziseka ngokwenene! Kodwa ukuba awunikeli ngqalelo kwezi ngongoma zisi-5, kamva kwingxaki eqhubekayo! next: Uyilo lwamaBhafu lokuBala ngoxabiso, ke ngoko Thatha ibhafu yokufudumeza ebusika!